Misy ifandraisany: Teknolojia fitsikilovana mivantana amin'ny mailaka | Martech Zone
Alakamisy Janoary 21, 2016 Alatsinainy, May 16, 2022 Douglas Karr
Ny indostrian'ny mailaka dia manana olana roa lehibe amin'ny fanohizana ny fampiasana mailaka faobe:
Personalization - Ny fandefasana hafatra mitovy, amin'ny fotoana iray ihany, ho an'ireo mpamandraka mailaka rehetra dia tsy mahazo ny hafatra marina amin'ny fotoana mety amin'ilay mahazo azy marina. Fa maninona i Marianne, 24 taona, no mahazo ny tolotra mitovy amin'i Michael, 57 taona, nefa izy ireo liana amin'ny zavatra tena samy hafa? Satria tsy manam-paharoa ny mpandray tsirairay, dia tokony ho toy izany koa ny hafatra. Ny mailaka manokana dia manome enina avo heny avo enina avo lenta, saingy 70% amin'ireo marika tsy mahay mampiasa azy ireo arakaraka MarketingLand.
Attention - Ny fotoana no olana hafa amin'ny fandefasana mailaka. Na dia natao manokana aza ny votoatin'ny mailaka, dia alefa miaraka amin'ny mpandray tsirairay ny mailaka rehetra. Izany dia na eo aza ny mpanjifa tsirairay manana fomba fiaina, fahazarana, na faritra misy fotoana. Amin'ny alàlan'ny fandefasana azy amin'ny fotoana iray ihany, ny orinasa dia tsy maintsy malahelo olona maro izay mety ho liana amin'ny tolotra saingy nahazo izany ivelan'ny varavarankelin'ny fifamatorana.
Ny fanatsarana ny fotoana fandefasana dia mety hiteraka fanatsarana 22% amin'ny fifamatorana mailaka.
Ny marketing amin'ny mailaka ihany no fantsona ankafizin'ny mpanjifa voatanisa hahazo fisondrotana avy amin'ny marika tiany. Fantatry ny orinasa fa mandefa mailaka be dia be hatrany izy ireo nefa miaraka amin'ny fifaninanana ao anaty boaty miditra mahery vaika isan'andro, ny tsy fisian'ny maha-zava-dehibe ny mailaka dia tena manimba ny fiverenan'ireo marika mandefa azy.
Famahana ny olan'ny mailaka be
Ny mpivarotra dia nanandrana nanokana ny fanentanana tamin'ny marketing amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fampidirana fotsiny ny anaran'ny mpamandrika amin'ny hafatra na amin'ny laharana. Ny hevitra eto dia ny hampahatsapan'ilay mpandray ilay mailaka fa namboarina ary nalefa tany aminy irery. Na izany aza, tsy mora voafitaka ireo mpandray… indrindra rehefa tsy namboarina ho azy ireo ny atiny mailaka.
Ireo mpivarotra dia manana angon-drakitra misimisy kokoa amin'ny mpanjifa tsirairay ankehitriny noho izay nananany. Mampalahelo fa na tsy hainy ny mampiasa azy tanteraka na manana fitaovana matanjaka ampy hampiasana azy. Angamba tsy mpivarotra ny olana, fa ny fisian'ny mailaka mahazatra ihany no misy. Manan-danja namolavola vokatra matanjaka, nefa intuitive mamela ny ekipa mpivarotra hampiasa ireo angona ireo handefasana mailaka mety, amin'ny fotoana mety, ho an'ny mpamandrika tsirairay.
Manan-danja dia teknolojia fahitana mailaka mivantana izay mamakafaka ny tontolon'ny fanokafana sy ny fihetsiky ny mpandray tsirairay mba handefa ny hafatra amin'ny fotoana mety indrindra ary hanehoana ny atiny tena ilaina indrindra amin'ny fotoana tena izy.
Isaky ny fanokafana ny mailaka dia manova ny atin'ny hafatra amin'ny fotoana tena izy ho an'ny mpandray tsirairay i Reelevant miankina amin'ny fitaovana, ny toerana sy ny toetrandro amin'ny toerana sy ora voatondro. Ny tranokala e-commerce lamaody, ohatra, dia afaka manamboatra ny fampielezan-keviny hanehoana akanjo lava sy pataloha raha avy ny orana rehefa manokatra ny mailaka ilay mpandray, ary ny T-shirt sy ny shorts raha toa ka main-masoandro rehefa manokatra ity mailaka ity indray ny mpandray.
Miavaka i mailaka amin'ny mailaka betsaka amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka amin'ny fotoana samy hafa ho an'ny mpamandrika tsirairay. Mba hamantarana ny fotoana mety indrindra hifaneraserana amin'ny tsirairay amin'izy ireo, ny algorithm amin'ny sehatra dia mamakafaka ny fitondrantenany sy ny fahazarany amin'ny mailaka tsirairay azony. Arakaraka ny fandefasana mailaka bebe kokoa dia miha mahomby ny fampiharana.
Disclosure: Martech Zone dia mampiasa rohy mifandray amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: tarihiny sy ny rano indray mitetetarihio sy alatsaho ny mpanamboatra mailakavotoaty mavitrikapersonalization mailakafotoana fandefasana mailakapersonalizationmifandraikamandefa fotoanamandefa fanatsarana fotoana
CloudCraze: Ny sehatra Ecommerce namboarina ho an'ny Salesforce